Madaxweyne ku xigeenka dalka oo difaacay Uhuru Kenyatta – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne ku xigeenka dalka oo difaacay Uhuru Kenyatta
Star FM January 9, 2019
Ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa gaashaanka u daruuray hadal dhawaan ka soo yeeray xildhibaanka degaanka koonfurta Gatundu ee ismaamulka Kiambu Moses Kuria.
Mr. Kuria ayaa hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ku eedeyay inuu gobolka bartamaha oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo uu ku gacan bidixeeyay dhanka horumarka in kastoo markii dambe uu raaligelin bixiyay.
Madaxweynaha ayaa dhankiisa sheegay inuu hayo xil qaran oo uu xoogga saarayo sidii lagu horumarin lahaa dhamaan degaanada wadanka.
Ku xigeenkiisa , William Ruto ayaa dhankiisa difaacay waxqabadka maamulka talada haya ee jubilee isagoo madaxweynaha ku taageeray inaynan khasab ahayn in la horumariyo oo keliya degaanka ama gobolka hoggaamiyaha uu ka soo jeedo.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa qoraalo dhowr ah oo uu soo dhigay barta twitarka ku sheegay in siyaasiyiinta ka tirsan xisbiga Jubilee laga doonayo inay xalliyaan khilaafka u dhexeya oo aynan kala qeybsanaan dhanka hoggaanka ah ku kicin.
← Ergeyga qaramada midoobay ee Yemen oo la kulmay madaxweyne Hadi
Laba sarkaal oo horay uga tirsanaa guddiga EACC oo la ganaaxay →